Nzira yekuita yako sevha yeVPS mugore | Linux Vakapindwa muropa
Nguva iyo tekinoroji yemuno yaitonga yapera, nhasi, nekusvika kweIoT nevose kure services iyo yatinogona kushandisa kwese kwatinenge tiri, mikana mitsva yasvika yatisina kumbofungidzira kare. Zvese zvekutenda kunetiweki yemasaiti uye musika uri kukura wecomputer yegore, ine simba risingafungidzike. Mikana mitsva yakavhurwa vanhu nemakambani, pamitengo yemakwikwi uye nezvinhu zvinokodzera sevha yavo.
Thanks gore tinogona kuva nemafoni edu enhare, smartTV, kana maPC, mota dzakabatana, nezvimwe, kuwanda kwemasevhisi aimbove asingagone kana kudhura kwazvo. Aya masevhisi ari SaaS (Software seSevhisi), PaaS (Platform seSevhisi), uye IaaS (Zvivakwa seSevhisi), ndiko kuti, ivo vanopa webhu-based application sevhisi, mapuratifomu (yechokwadi masevhisi, data makopi, mameseji ,.
Kuita kuti izvi zvikwanisike, kune makambani anowana zvese zvinodhura zvishandiso uye masystem ekupa vatengi vavo zvese kugona izvo izvi zvihombe michina zvavanazvo. Kugovanisa zviwanikwa zvako muzvikamu, akati zvikamu zvinogona kupihwa zvakasiyana kune mumwe mutengo kune avo vese vanozvida uye havagone kana kuda kuwana server kana supercomputer. Izvi zvinoreva nzvimbo hombe dzedata, mapurazi mahombe seva seiyo ari mumufananidzo mukuru, nemazana kana zviuru zvema processor, huwandu hukuru hwe RAM uye masimba makuru ekuchengetera pabasa rako ...
Munyaya iyi isu tichaedza kujekesa zvakanakira izvi kuti masevhisi egore akafananidza nekushandisa kwavo ivo vega masystem, kana zvirinani, zvinetswa zvinomuka kana tichida kuve neyedu sevha mumba medu kana kambani. Tichaongorora sarudzo dzakasiyana, zvakanakira sevha yeVPS uye tichaonawo zvimwe zvakawanda zvingangopihwa nemasevhisi ekubhadhara anogona kuwanikwa paInternet.
1 Kubatsira kwegore masevhisi achienzaniswa neako emuno
2 VPS server
3 Nei ndichida VPS?
4 Clouding nemikana yayo
Kubatsira kwegore masevhisi achienzaniswa neako emuno
Zvakanakira yekushandisa server iri kure yakawanda kwazvo. Imwe yeakanyanya chikamu chehupfumi, nekuti kana tichida kushandisa sevha yedu tinenge tave nesarudzo dzakasiyana. Imwe ingadai iri yekushandisa PC kana Raspberry Pi mhando SBC kana yakafanana kuishandisa sevha, neLinux uye anodiwa software mapakeji, pamwe neyakaganhurirwa Hardware izvo izvi zvinoreva. Imwe ndeye kutenga isingadhuri micro kana diki server, asi iko kubatana kune yepamhepo network (uye mazhinji madiki mabhizinesi) ingangove ichiri dhonza senge yekutanga kesi.
Kana mutoro wehupfumi ukapfuudzwa uye nekudaro zvausingakwanise yezvivakwa zvedu, panogona zvakare kuve nemamwe marudzi ezvinokanganisa sekutonga sisitimu huru yatinayo pamberi pedu. Ndiro basa remaneja maneja, uye kana isu tisina imwe kana ruzivo rwedu rwusinga svike zvakanyanya, zvinoreva kuti kupinza vechitatu mapato kuita iri basa. Naizvozvo, kana iri chirongwa hombe, sarudzo yakanakisa ndeyekusiira izvi mumaoko ekambani yakazvipira kwairi uye inotipa sevha sevhisi yakanangana.
MhedzisoKana isu tisingade kutsamira pane inodhura Hardware, yakaoma software manejimendi, kushomeka kwehunyanzvi rutsigiro, pamwe nekudzivirira bandwidth kukwana, sarudzo yakanakisa kuroja wechitatu bato sevhisi ...
Mukati meaya masevhisi akatsanangurwa mundima dzapfuura isu tine izvo zvatinoziva se VPS (Virtual Private Server) kana chaiyo yakavanzika server. Uye kunyangwe isu tichigona kumisikidza maseva madiki kumba, kune huwandu hweshumiro idzo idzi mhando dzemaseva dzinototipa isu pasina zvipingaidzo zvatakatarisa muchikamu chakapfuura. Muenzaniso weiyi ipuratifomu yepamhepo clouding, pakati pevamwe…
Uye kune avo vasingazive, sevhisi yeVPS inopa mukana wekupatsanura sevha yepanyama mumaseva akasununguka akazvimirira, ayo avanoshandisa semachina akazara uye neakasiyana masisitimu anoshanda. Aya masevhisi, sezvaari chaiwo, anotendera mukana wekutangwazve kana kugadzirisa imwe neimwe yadzo pamadiro, yakazvimiririra kubva kune vamwe uye kubva kune chaiyo server pachayo. Zvese zvinogoneka nekuda kwe virtualization matekinoroji, izvo zvinoita kuti kubviswa uku kuitike.
Vashandisi vachakwanisa kuve kuzara kuzere kune chaiyo server, asi kwete iyo chaiyo, ine midzi yerombo uye kugona kuisa ese software yavanoda. Uye zvakare, kugona uye kuita kweiyo Cloud server muSpain ivo vachakwira, nekuti ivo vari kushandisa hofisi yemuchina muhombe. Ndozvatinopihwa nemupi webasa, ivo vachichengeta manejimendi, ma network, mabhakiti, uye voita kuti zvese zvishande nemazvo.
Nei ndichida VPS?
Mikana yacho yakawanda, nekuti kunyangwe iri sevhavha chaiyo, hunhu hahuzo kusiyaniswa kubva kune chaiyo server mumaziso emushandisi kana mutengi. Naizvozvo, isu tine timu ye server yekumisikidza iyo yekushandisa system yatinoda, uye ese akadikanwa software mune yega kesi kuve nehuwandu hwakawanda hweakasiyana masevhisi, kubva mukuchengetedza senge NAS, multimedia server, kuitisa kuitisa mawebhusaiti uye mamwe masevhisi, webhu. maapp, FTP, nezvimwe.
Resumiendo, sevha huru pamutengo unosetsa wekuti iwe uite chero chaunoda naye.
Clouding nemikana yayo
Kana iwe ukafunga nezve Clouding, unogona kusarudza sevhisi yakakodzera kwazvo pane zvaunoda uye nemitengo inogona kubva kubva pa € ​​10 pamwedzi kwe1 GB ye RAM chaiyo, 1 vCore ye processor, uye 25GB yekugona kweiyo SSD hard drive, anosvika mazana akati. Maeuro pamwedzi kana ukasarudza epamusoro zvigadzirwa zvehardware (16 vCores, 32GB RAM, 1.9TB yeSSD). Uye zvakare, iwe unogona kumisikidza iyo Firewall uye DNS mukati meyore online yekumenu menyu iyo yavanopa.
Kunyangwe ingangoita mazana mana echimwe chinhu euros yeiyo yakasimba kwazvo Hardware chingaite kunge mutengo wakakwira, iwe unofanirwa kuyeuka kuti server yakatsaurirwa yeaya maitiro. zvaizokubhadharira mari inosvika € 7000 (Izvi zvinoreva nezve € 600 pamwedzi). Uye kune izvo iwe unofanirwa kuwedzera kushandiswa kwemagetsi, kugadzirisa kwayo, manejimendi, yekuwedzera network michina, uye kunyangwe ipapo dambudziko remambure raizoramba riripo, iro raunofanira zvakare kuwedzera kune iyo rondedzero yemitengo mutengo wehunhu network inotsigira traffic kuti sevha ine… Saka inobhadhara kubhadhara basa!
Uye pamutengo we sevhisi iyi Unogona kuve neVPS server ine simba nekuda kwekuita kweIntel Xeon processors, yakanaka bandwidth kune yako network nekuda kweCisco 20Gps tekinoroji, Smart cache, solid state hard drives, uye mamwe matekinoroji akadai seCeph Kuchengeta, KVM OpenStack, chengetedzo, DNS Kubata, mukana wekusarudza pakati peWindows kana Linux, girazi rakatatu kudzivirira kurasikirwa nedata rako uye marongero, rutsigiro rwakaisirwa, mhando, kureruka, manejimendi manejimendi, nezvimwe.
Kune chero mibvunzo kana mazano, Usakanganwa kusiya zvaunotaura, tichafara kukupindura ... Uye ndinovimba chinyorwa ichi chakubatsira iwe kuita sarudzo nenjere.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Nzira yekuita yako sevha yeVPS mugore
Carlos escobar akadaro
Ndiri kushandisa iyi kambani irikuita mushe kusvika nanhasi uye inopa mabhenefiti akakurisa kupfuura aya anosimudzirwa pano:
Pindura Carlos Escobar
Chinhu chine njodzi pamusoro peiyi tekinoroji ndechekuti iyo iri kumusoro inogona kusarudza kuti iwe uparadze mota yako uri kure uye nekugumisa hupenyu hwako kana iwe ukapa mukutonga kuzere ...
Zvichiri zvakachipa uye kusatadza kumwe chete mugore rimwe chete
Mariano rocha akadaro
Zvinotaridza kwandiri kuti zvichiri kudhura kwazvo, asi ini ndinofarira zano kana ndaida kushanda nebigdata. Ndinovimba gare gare izvi zvichashanda semahara google kana mega storages kune imwe nhanho yekuyedza uye kudzidza maitiro ekushandisa iyo tekinoroji.
Pindura Mariano Rocha